सामूहिक बलात्कार गरी फरार रहेका दुई अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ | Bharosha News
Home समाचार सामूहिक बलात्कार गरी फरार रहेका दुई अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ
इलाम : इलाममा जबर्जस्ती करणी गरी फरार रहेका दुई अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले चुलाचुली–३ का ३० वर्षीय मिलन भनिने अनिश राई र ३१ वर्षीय जितकुमार भनिने निश्चल राईलाई पक्राउ गरेको हो । फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अभियानअन्तर्गत अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई फरार रहेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
Previous articleनेपाल प्रहरीका ४८८ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा (सूचीसहित)
Next articleनेकपा सचिवालय बैठक आज बालुवाटारमा बस्दै
अमेरिकी डलरको भाउ आज कति पुग्यो ?
काठमाडौं : अमेरिकी डलरको भाउ केही बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३६ पैसा...
बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कती?
काठमाडौं : आइतबार सुन प्रतितोला तीन सयले बढेर ९४ हजार तीन सयमा पुगेको छ। शुक्रबार सुन प्रतितोला ९४ हजार तोलमा कारोबार भएको...